Sawubona Twitter, Ngizamile Izikhangiso futhi Nakhu Okwenzekile | Martech Zone
ULwesithathu, May 18, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngifunde ukubuyekezwa okuxubile ku-Twitter Advertising. Ngingazange ngiyisebenzise ngokwami, ngacabanga ukuthi kungakufanelekela ukudubula. Ngingathanda ukuheha abanye abantu ku-akhawunti ye-Marketing Technology ye-Twitter futhi bengifuna ukubona ukuthi ezinye izikhangiso zingasiza yini. Ngicabanga ukuthi angizukuthola.
Sawubona @TwitterAds, ngizamile ukusebenzisa imali nawe kodwa awungivumanga
Ngizulazule ngokucophelela izinketho zokuhlunga ukunciphisa izethameli zami. Ngikhethe ukumaketha njengesigaba, ngafaka amagama athile kusuka ezigabeni zethu ukuzobhekisa kuzo, ngaze ngapha amanye ama-akhawunti womsebenzisi ambalwa ukuzama ukuheha abalandeli babo futhi.
Lapho ngiqeda ukukhomba, nganikezwa ithuba lokukhetha enye yamaTweets ami, noma ngizakhele eyami. Ngakhetha ukuzenzela okwami. Nakulokhu… ngichithe isikhathi esiningi ngakha umyalezo ukuze ngiwuhlole nesithombe esihle sawo.
Ngibe sengizama ukushicilela iKhadi le-Twitter… ngibona iphutha:
Akunankinga, ngithi kimi. Ngabona ukuthi kunenkinobho yokulondoloza ezosindisa umkhankaso wakho phezulu ngakwesokudla. Ngakho-ke, ngichofoza ukulondoloza futhi… ngibona iphutha:
Angazi nakancane ukuthi ngenzeni manje. Angikwazi ukusindisa wonke umsebenzi engiwenze ngibhekise umkhankaso futhi angikwazi ukugcina wonke umsebenzi engiwenze kubuciko.
Tags: Twitterisikhangiso se-twitter siyahlulekaizikhangiso ze-twitterukukhangisa kwe-twitterI-twitter yehluleka ukudalai-twitter iyahluleka
I-gShift: Isifundo Samacala ku-SaaS Onboarding Best Practices
Nokubonga Amanda (@nokuthula_bongza)
May 20, 2016 ku-3: 33 AM
Awuwedwa! Ngiyazigijimisa izikhangiso ze-Twitter, kwesinye isikhathi ngizenzela zona, ikakhulukazi ezenzelwe amaklayenti futhi empeleni, ikalishi. Ngidume ngokuhamba ngithukuthele isikhathi nesikhathi. Badinga ngempela ukulungisa lokhu uma bezokwenza imali.